Hanomboka Amin’ny Vaovao Tsara Ve Izahay? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2014 14:33 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, عربي, Nederlands, Français, Español, Català, বাংলা, Svenska, Aymara, 日本語, polski, English
Milaza ry zareo fa manana sisim-bolafotsy avokoa ny isaky ny rahona. Saripikan'i Matthew Perkins ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Indro ny vaovao tsara: Nandritra ny taona maro ny Global Voices no nitondra tantara tsy voaisa ahitanao ny fanantenana, ny fahasahiana ary ny fahaiza-manangan'ny olona avy amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao. Ary indro ny vaovao ratsy: Tahaka ny tranonkalam-baovao hafa dia matetika izahay no voampanga ho mifantoka amin'ny fijery miiba ary mety mahakivy anao aza.
Maika hamaky ny Global Voices ve ianao? Sa mihemotra raha vao mahita tantaram-pijaliana sy tsy rariny tsy mety tapitra hita ao? Amin'ny 2014 ity izahay mikasa ny hanohy amin'ny famoaham-baovao mamaha olana kokoa, ary manantena hahita hazavana kokoa sy mahaolombelona mihoatra noho ny aizina sy ny hadisoam-panantenana.
Tsy midika izany fa tsy hiraharaha ny zavatra ratsy tahaka ny herisetra sy ny fahantrana izahay. Fa tianay ny hampisongadina kokoa ny zavatra tsara sy ny fivelarana. Raha ny marina dia efa nanomboka izany izahay, tamin'ny famoahana tantara momba ny vaovao tsara fito tsy mbola renao mihitsy avy any Yemen, na ankizy antapitrisany nahazo boky maimaipoana tao Bangladesh[mg] ary ny fomba itehirizan'ny Angoley ny fiteniny amin'ny aterineto.
Maro loatra ny tantaranay no miompana amin'ny hetsika sosialy an-tserasera sy ny fanetsiketsehana ny olom-pirenena ao aminy hanatsarana ny fiarahamoniny. Tianay ny hilaza ity vaovao ity amin'ny fomba miteraka fanantenana, fa tsy hianjera any amin'ny fijery miiba mahazatra ireo famoaham-baovao be mpanaraka.
Ho an'ireo vao miainga, nanangana ny sokajy Vaovao Tsara izahay ato amin'ny Global Voices.[ato ny an'ny teny malagasy]
Tamin'ny faran'ny volana desambra, nisy ny resadresaka tamin'ny GV Face momba ity hevitra ity niarahana tamin'ny mpiara-manorina Ethan Zuckerman, sy ny lefitry ny tonia, Sahar H. Ghazi, tonian'ny advocacy, Ellery Biddle, ary ny tenako. Lasa tetikasa lavitr'ezaka hanovana tsikelikely ny fomba fitantaranay iarahana amin'ny mpanoratra sy ny mpanitsy [tonia] ity raharaha ity.
Manaraka ny fitarihan'ny tranonkala hafa sy ny fikambanam-baovao izay mitaridalana amin'ny karazam-pitantarana tahaka izao amin'ny alalan'ny zorombaovao miabo, fanaovan-gazety mirona mankany amin'ny famahana olana, tatitra manorina sy ny mitovitovy amin'izany izahay. Na dia ny Huffington Post aza manana ny zorom-Baovao Tsara (na dia hahita tantaram-biby fiompy an-trano maro noho ny ato amin'ny Global Voices aza ianao any).
Ny tontolo tianao hiainana ato amin'ny Global Voices dia mahafinaritra. Onenan'olona mahatsangan-javatra sy sahy mino amin'ny fanaovana izao tontolo izao ho toerana tsaratsara kokoa. Angamba mety hahatonga ny mpamaky hahatsapa tena izahay hoe misy koa ny zavatra azo atao.
Tsidiho ary ny Vaovao Tsara ato aminay dia ampahafantaro anay hoe inona koa no tianareo ho hita ato amin'ny Global Voices.